နိုင်ငံတကာကျောင်းသားများအတွက် ကာတာရှိ ထိပ်တန်းအကောင်းဆုံး တက္ကသိုလ် 10 ခု | သင်တန်းကြေးနှင့် အသေးစိတ်အချက်များ ၁
နိုင်ငံတကာကျောင်းသားများအတွက် ကာတာရှိ ထိပ်တန်းအကောင်းဆုံး တက္ကသိုလ် 10 ခု | သင်တန်းကြေးများနှင့် အသေးစိတ်အချက်များ
မေလ 19, 2022 Daniel Okeke
နိုင်ငံတကာကျောင်းသားများအတွက် ကာတာရှိ တက္ကသိုလ်အများစုကို ကမ္ဘာပေါ်ရှိ အထင်ကရနိုင်ငံများမှ ထိပ်တန်းနိုင်ငံတကာတက္ကသိုလ်များမှ တည်ဆောက်ထားကြောင်း သင်သိပါသလား။ အမေရိကန်နဲ့ ယူကေတို့လို နိုင်ငံတွေအကြောင်း ပြောနေတာ။
တကယ်တော့, ကာတာတက္ကသိုလ် မြန်မာနိုင်ငံမှာ တစ်ခုတည်းသော အစိုးရတက္ကသိုလ်ပါ။ တစ်ခုရှိသေးတယ်။ လက်တစ်ဆုပ်စာ အကျိုးကျေးဇူးများ သင့်လူမျိုးပြင်ပမှ လူသစ်များနှင့်တွေ့ဆုံခြင်း၊ ယဉ်ကျေးမှုနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်အသစ်ကို ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်မှုတို့အပါအဝင် နိုင်ငံရပ်ခြားတွင် ပညာသင်ကြားခြင်းနှင့်အတူ လာပါသည်။
ကာတာသည် ယဉ်ကျေးမှုများ၊ လူမျိုးစုများနှင့် နောက်ခံများစွာကို ကြိုဆိုသည့်နေရာဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့၏ အတန်းအများစုမှာ အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် (၎င်းသည် သင်မစိုးရိမ်ရပါ။ အာရဗီစကားပြော နိုင်ငံ)။ ထို့အပြင် ကာတာတွင် ပညာသင်ကြားရာတွင် အတွေ့အကြုံများစွာဖြင့် ရောက်ရှိလာပြီး လှပပြီး ခံ့ညားထည်ဝါသော ရှုခင်းများ၊ အံ့သြဖွယ်ဗိသုကာပညာများနှင့် စွန့်စားခန်းများရှိသော သဲကန္တာရပတ်ဝန်းကျင်ကို သင် ထိတွေ့နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ထိပ်တန်းတက္ကသိုလ်များစွာရှိသည့်နိုင်ငံဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့တွင် လူသိများသောမြို့လည်းရှိသည်။ "ပညာရေးမြို့တော်" နိုင်ငံတကာကျောင်းသားများအတွက် ကာတာရှိ ဤတက္ကသိုလ်အများစုကို သင်ရှာတွေ့နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ မင်းရဲ့ တက္ကသိုလ် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းကို စတင်ဖို့ လှပတဲ့ နိုင်ငံတစ်ခုပါ။ နယူးဇီလန်နိုင်ငံတကာ ကျောင်းသားများကို နွေးထွေးစွာ ကြိုဆိုသည့် နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်သည်။
ထို့အပြင် အခြားနိုင်ငံများမှ နိုင်ငံတကာ ကျောင်းသားများကို ကြိုဆိုကြပြီး နိုင်ငံတကာ ပညာသင်ဆုများ တွင် ပါဝင်ခွင့် ပေးသည့် နိုင်ငံများ ဖြစ်သည့် နိုင်ငံများ ၊ ကေနဒါ နှင့် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင် နိုင်ငံတကာအတွက် တံခါးကျယ်ကျယ်ဖွင့်ပါ။ ထို့အပြင် ၎င်းတို့သည် ဤနိုင်ငံတကာကျောင်းသားများအား ပညာသင်ဆုများစွာ ပေးသည်။
နိုင်ငံတကာကျောင်းသားများအတွက် ကာတာနိုင်ငံရှိ အကောင်းဆုံးတက္ကသိုလ်များသို့ ကျွန်ုပ်တို့ မ၀င်ရောက်မီ၊ ဤကောလိပ်များသို့ သင်မ၀င်ရောက်မီ သင်လိုအပ်မည့် လိုအပ်ချက်အချို့ကို လေ့လာကြည့်ကြပါစို့။
နိုင်ငံတကာကျောင်းသားအဖြစ် ကာတာတွင် ပညာသင်ကြားရန် လိုအပ်ချက်များ
Ph.D ဘွဲ့ကို ဒီဂရီ
နိုင်ငံတကာ ကျောင်းသားများအတွက် ကာတာတွင် ပညာသင်ကြားရန် ကုန်ကျစရိတ်
2. Weill Cornell ဆေးပညာ – ကာတာ
3. ကာတာရှိ Georgetown တက္ကသိုလ်
4. ကာတာရှိ Texas A&M တက္ကသိုလ်
7. Doha Institute for Graduate Studies (မဟာဘွဲ့)၊
8. Virginia Commonwealth University School of the Arts ကာတာ
9. ကာတာရှိ Northwestern တက္ကသိုလ်
နိုင်ငံတကာကျောင်းသားများအတွက် ကာတာရှိတက္ကသိုလ်များ - FAQs
ကာတာမှာရှိတဲ့ တက္ကသိုလ်က ဈေးကြီးလား။
ကာတာနိုင်ငံတွင် နိုင်ငံတကာကျောင်းသားတစ်ဦးအဖြစ် ပညာသင်ကြားရန် လိုအပ်ချက်များသည် အခြားထိပ်တန်းနိုင်ငံများမှ တောင်းဆိုမည့် လိုအပ်ချက်များနှင့် ကွာခြားမှုမရှိပေ။ ဤသည်မှာ ဘွဲ့၊ မာစတာနှင့် Ph.D အတွက် လိုအပ်ချက်များဖြစ်သည်။ ကာတာတွင်ပညာသင်ကြားရန်ဒီဂရီ။
တရားဝင်ပညာရေး 12 နှစ်ကို အောင်လက်မှတ်ရလဒ်ဖြင့် ပြီးမြောက်သည်။
2.0 စကေး သို့မဟုတ် "C" နှင့်ညီမျှသော အနည်းဆုံး CGPA သည် 4.0 ဖြစ်သည်။
အနည်းဆုံး သိပ္ပံ (ရူပဗေဒ၊ ဓာတုဗေဒ သို့မဟုတ် ဇီဝဗေဒ) အပါအဝင် အနည်းဆုံး ဘာသာရပ်6ခု အောင်မြင်ပြီး
သိပ္ပံဘွဲ့အတွက် အနည်းဆုံး သိပ္ပံဘာသာရပ်2ခုနှင့် သင်္ချာဘာသာရပ် အနည်းဆုံး 1 GPA သို့မဟုတ် "C" နှင့် ညီမျှသော သင်္ချာ 2.00 ခု အောင်မြင်ရမည်။
SAT Reasoning Test သို့မဟုတ် ACT လိုအပ်သည်။
TOEFL သို့မဟုတ် IELTS လိုအပ်နိုင်သည်။
ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ ထုတ်ပြန်ချက် တင်ပြခြင်း။
အကိုးအကား အနည်းဆုံး2လုံး အင်္ဂလိပ်လိုရေးပါ။
အနည်းဆုံး GPA အနည်းဆုံး 2.8 ဖြင့် ရရှိထားသော ဘွဲ့ သို့မဟုတ် အထက်တန်းအဆင့် (၎င်းသည် တက္ကသိုလ်ပေါ်မူတည်၍ ပြောင်းလဲနိုင်သည်)
အပိုပရိုဂရမ် ဝင်ခွင့်လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းရန် လိုအပ်ပါသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ၊ သင်ကမ်းလှမ်းမည့်အစီအစဉ်နှင့်ကောလိပ်သည်အခြားလိုအပ်ချက်များကိုဆုံးဖြတ်လိမ့်မည်။
အနည်းဆုံး 3.0 စုစုပေါင်း GPA ဖြင့် Master ဘွဲ့ သို့မဟုတ် ထို့ထက်မြင့်သည်။ (တက္ကသိုလ်ပေါ်မူတည်၍ ပြောင်းလဲနိုင်သည်။)
Ph.D အားလုံးအတွက် စံသတ်မှတ်ထားသော စာမေးပွဲရမှတ်များ (ဥပမာ GRE၊ GMAT) လိုအပ်မည်ဖြစ်ပါသည်။ အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် ပြသထားသော အစီအစဉ်များ။
ဤသည်မှာ ကျွန်ုပ်တို့တောင်းဆိုထားသော နိုင်ငံတကာကျောင်းသားများအတွက် ကာတာရှိတက္ကသိုလ်များအတွက် အနိမ့်ဆုံးလိုအပ်ချက်ဖြစ်ကြောင်း သတိပြုသင့်သည်။
နိုင်ငံတကာကျောင်းသားတစ်ယောက်အနေနဲ့ ကာတာမှာ ပညာသင်ကြားဖို့ သင်ဘယ်လောက်ကုန်ကျနိုင်လဲဆိုတာ လေ့လာကြည့်ရအောင်။
အမှန်မှာ၊ နိုင်ငံတကာ ကျောင်းသား ပေးဆောင်ရမည့် ကျောင်းသူ ကျောင်းသား လစာနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ကွာခြားမှု မရှိပါ။ ကျူရှင်နှင့် အခကြေးငွေများမှာ အတူတူနီးပါးဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့သည် ကာတာရှိ နိုင်ငံတကာတက္ကသိုလ်အများစုတွင် အတူတူပင်ဖြစ်သည်။
နိုင်ငံတကာကျောင်းသားများအတွက် ကာတာရှိ တက္ကသိုလ်များ၏ ပျမ်းမျှကျူရှင်ခမှာ $20,000 သို့မဟုတ် QAR 72,820 ဖြစ်သည်။ အချို့တက္ကသိုလ်များသည် ခရက်ဒစ်နာရီများကို အာရုံစိုက်ထားပြီး 1 ခရက်ဒစ်နာရီအတွက် ပျမ်းမျှကျူရှင်မှာ $2,700 သို့မဟုတ် QAR 9,830.70 ဖြစ်ပြီး စာသင်ချိန်တစ်ခုလျှင် 12 credit hours ပြီးရန် လိုအပ်ပါသည်။
ကာတာတွင် ပညာသင်ကြားရန် ကျူရှင်ခ၏ ကုန်ကျစရိတ်ကို ကြည့်ပြီး၊ အထူးသဖြင့် ဝင်ငွေနည်းသော နိုင်ငံများမှ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူအချို့အတွက် တတ်နိုင်မည်မဟုတ်ပေ။ ထို့ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့စာရင်းသွင်းထားသော နိုင်ငံတကာကျောင်းသားများအတွက် ကာတာရှိ တက္ကသိုလ်များအားလုံးသည် ပညာသင်ဆုများ ပေးဆောင်ပါသည်။
ထို့အပြင်၊ သင်သည် ၎င်းတို့၏ ကုသိုလ်အခြေခံပညာသင်ဆုများအတွက် အရည်အချင်းမပြည့်မီပါက၊ အချို့သောတက္ကသိုလ်များသည် လိုအပ်သည့်အခြေခံထောက်ပံ့ကြေးများကို ပေးဆောင်ပါသည်။ ကောင်းသောအပိုင်းမှာ၊ HBKU နှင့် CUC Ulster University Qatar မှလွဲ၍ ဤပညာသင်ဆုများကို အလွယ်တကူစစ်ဆေးရန် လင့်ခ်များကို ပေါင်းထည့်ထားသည်။
ကာတာတက္ကသိုလ်သည် နိုင်ငံတကာကျောင်းသားများအတွက် ကာတာနိုင်ငံရှိ အကောင်းဆုံးတက္ကသိုလ်များထဲမှ တစ်ခုမဟုတ်ပဲ အရှေ့အာရှတွင် အကောင်းဆုံးတက္ကသိုလ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံးတက္ကသိုလ်များထဲမှ တစ်ခုဖြစ်လာရန် တွန်းအားပေးလျက်ရှိသည်။ သူတို့ရဲ့ တိုးတက်မှုက ပြောင်းလာတာ 490 ရာထူး 2016 အတွက် 224 ရာထူး 2022 ခုနှစ်တွင် (QS) ကမ္ဘာ့တက္ကသိုလ်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်။
QU သည် အကြီးဆုံး နှင့် အသက်အကြီးဆုံး ကာတာရှိတက္ကသိုလ်၊ ၎င်းတို့၏အများပြည်သူဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းဖြစ်သည်။ လူသိ နှင့် လေးစားဖွယ်ကောင်းသော ၎င်း၏ နိုင်ငံတကာ ကျောင်းသားများအတွက် ပထမတန်းစား အခွင့်အလမ်းများကို ပေးဆောင်နိုင်မှု။ နိုင်ငံပေါင်း 8,000 နီးပါးရှိ နိုင်ငံတကာ ကျောင်းသားပေါင်း 85 ခန့်ဖြင့်၊ သင်သည် မတူညီသော ယဉ်ကျေးမှုများ၊ လူမျိုးစုများ ပြည့်နှက်နေသော တက္ကသိုလ်တစ်ခုသို့ ရောက်ရှိနေပြီး သင့်နိုင်ငံမှ လူများကို သင်တွေ့မြင်ရမည်မှာ သေချာပါသည်။
QU သည် ကာတာရှိ နိုင်ငံတကာကျောင်းသားများအတွက် ၎င်း၏ပရိုဂရမ်များနှင့် သင်တန်းများကို နိုင်ငံတကာ အသိအမှတ်ပြုမှုနှင့် ကိုက်ညီကြောင်း သေချာစေသော ကာတာရှိ တက္ကသိုလ်များထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် QU သည် ကာတာမြို့တော် ဒိုဟာနှင့် မဝေးလှပါ၊ ၎င်းနှင့် ၂၆ ကီလိုမီတာသာ ဝေးသည်။
အရေးအကြီးဆုံးမှာ၊ QU သည် ပညာသင်နှစ်တစ်နှစ်လျှင် ပညာသင်ဆုလက်ခံသူ ၄၀၀ ခန့်ကို ချီးမြှင့်သည့် ပညာသင်ဆုများစွာကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။
သင်လိုက်နေတဲ့ သင်တန်းပေါ်မူတည်ပြီး သူတို့ရဲ့ သင်တန်းကြေးက ကွဲပြားပါတယ်၊ ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ ၎င်းတို့၏ သင်တန်းကြေးအကြောင်း ပိုမိုသိရှိရန်။
ကာတာတွင် အကြီးဆုံးနှင့် ရှေးအကျဆုံး တက္ကသိုလ်
ကျောင်းဝင်းတွင် နိုင်ငံတကာ ကျောင်းသား ၈၀၀၀ ခန့်ရှိသည်။
နိုင်ငံပေါင်း 85 နီးပါး
ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် လက်ခံသူ 400 ကို ပညာသင်ဆုများ ပေးအပ်သည်။
ကျောင်းသားဟောင်း ၂၈၀၀၀ ကျော်
နိုင်ငံတကာ ထိပ်တန်းအဖွဲ့အစည်းတွေက အသိအမှတ်ပြုပါတယ်။
Doha မှ ၂၆ ကီလိုမီတာ ကွာဝေးသည်။
ကောလိပ် ၄ ခု
ကာတာရှိ Weill Cornell ဆေးပညာသည် အမေရိကန်နိုင်ငံပြင်ပတွင် တည်ဆောက်ခဲ့သည့် ပထမဆုံးသော အမေရိကန်ဆေးကျောင်းဖြစ်ပြီး နိုင်ငံတကာကျောင်းသားများအတွက် ကာတာရှိ အကောင်းဆုံးတက္ကသိုလ်များထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် အရှေ့အလယ်ပိုင်းတွင် ဆေးပညာ၊ ဇီဝဆေးသုတေသနနှင့် လူဦးရေသုတေသနတွင် ဦးဆောင်နေသည်။
၎င်းကို ကာတာတွင် ၂၀၀၁ ခုနှစ်တွင် Cornell University နှင့် Qatar Foundation တို့ကြား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဖြင့် တည်ထောင်ခဲ့ပြီး 2001 ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလတွင် Weill Cornell သည် ကြီးမားသောလှုပ်ရှားမှုတစ်ခု ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ၎င်းတို့သည် ၎င်းတို့၏ ပညာရေးဆိုင်ရာ ပရိုဂရမ်များကို 2014 နှစ်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ပရိုဂရမ်ကြီးတစ်ခုအဖြစ် ပေါင်းစပ်ထားသည်။
ဒါကြောင့် အခုကျောင်းက ဆေးကျောင်းသားတွေကို ပိုပြီး အာရုံစိုက်လာတယ်။ ရည်မှန်းချက်-oriented. လက်ရှိတွင် သင်တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်ရပြီး 2014 ခုနှစ်မတိုင်မီကဲ့သို့ပင် ဒုတိယအကြိမ်ဝင်ခွင့် ထပ်မံတက်ရောက်ရန် မလိုအပ်တော့ပါ။
ယင်းကြောင့် ကျောင်းသားများသည် ၎င်းတို့၏ လေ့လာမှုအပေါ် အာရုံစူးစိုက်မှုကို ဆက်လက်ရရှိစေသည်။ ထို့အပြင် သင်သည် အခြားသောကောလိပ်တွင် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာသင်တန်းများ ပြီးဆုံးပါက WCM-Q4နှစ်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပရိုဂရမ်အတွက် လျှောက်ထားရန် ကြိုဆိုပါသည်။
WCM-Q သည် Massachusetts General Hospital ကဲ့သို့ ကျော်ကြားသော တက္ကသိုလ်များတွင် ၎င်းတို့၏ နေထိုင်ခွင့်အစီအစဉ်ကို လုပ်ဆောင်ရန် အံ့သြဖွယ်ကောင်းသော ကျောင်းသားများကို တီထွင်ခဲ့သည့် နိုင်ငံတကာကျောင်းသားများအတွက် ကာတာရှိ တက္ကသိုလ်အနည်းငယ်ထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ New York-Presbyterian/Weill Cornell ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဌာန၊ နှင့် Johns Hopkins ဆေးရုံ။
၎င်းတို့၏ကျူရှင်ကြေးများသည် New York City ရှိ Weill Cornell Medical College နှင့် တူညီပြီး ၎င်းသည် $64,500 ဝန်းကျင်ဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့၏လျှောက်လွှာကြေးမှာ $75 ဖြစ်သည်။
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု အပြင်ဘက်မှာ ဆောက်ထားတဲ့ ပထမဆုံး အမေရိကန် ဆေးကျောင်း
ဤသည်မှာ မတူကွဲပြားသော ယဉ်ကျေးမှုနှင့် ယုံကြည်ချက်များကို နွေးထွေးစွာ ကြိုဆိုသည့် နိုင်ငံတကာ ကျောင်းသားများအတွက် ကာတာရှိ တက္ကသိုလ်များထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ တက္ကသိုလ်သည် နိုင်ငံပေါင်း ၅၂ နိုင်ငံတွင် သိပ္ပံဘွဲ့ (BSFS) ဘွဲ့ရ 633 ဦးကို မှတ်တမ်းတင်ထားပြီး ၎င်းတို့သည် နိုင်ငံရေး၊ ဘဏ္ဍာရေး၊ အနုပညာ၊ ပညာရေး၊ နိုင်ငံတကာ အတိုင်ပင်ခံစသည်ဖြင့် ထူးချွန်သော ဝန်ထမ်းများ ဖြစ်လာစေရန် ရှေ့တိုးဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။
GU-Q သည် ၎င်း၏ကျောင်းသားများအား ကမ္ဘာ့စိန်ခေါ်မှုအချို့အတွက် ကောင်းမွန်သောဖြေရှင်းနည်းများကို အကောင်အထည်ဖော်နိုင်စေရန် ၎င်း၏ကျောင်းသားများကို လေ့ကျင့်ပေးလျက်ရှိသည်။ ထို့အပြင်၊ ၎င်းတို့သည် ကျောင်းသားများ၏ စိတ်အားထက်သန်သော သင်ယူမှုအသိုက်အဝန်းကို ပြုစုပျိုးထောင်ပေးခဲ့ပြီး နေထိုင်သည့် ကျောင်းသားများနှင့် နိုင်ငံတကာကျောင်းသားများအား ဘက်လိုက်မှုမရှိဘဲ အပြန်အလှန်ဆက်ဆံရန် ကူညီပေးသည်။
GU-Q သည် ကာတာရှိ အကောင်းဆုံး တက္ကသိုလ်များထဲမှ တစ်ခုဖြစ်ပြီး ယဉ်ကျေးမှု ဆိုင်ရာ ခရီးစဉ်များ တွင် ကျောင်းသား များ သည် ၎င်းတို့၏ ယဉ်ကျေးမှု ကို လေ့လာ ကာ ၎င်းတို့ ကိုယ်တိုင် လေ့လာ သည့် နေရာများသို့ သွားရောက် ကြသည့် နိုင်ငံတကာ ကျောင်းသား များအတွက် အကောင်းဆုံး တက္ကသိုလ် တစ်ခု ဖြစ်သည်။ စာသင်ခန်းပြင်ပတွင် လူမှုရေးအသင်းအဖွဲ့များ၊ အားကစားများ သို့မဟုတ် နိုင်ငံခြားသူငယ်ချင်းများ ဖွဲ့ခြင်းကဲ့သို့သော လှုပ်ရှားမှုများစွာကို လုပ်နိုင်သည့်အပြင် ပြိုင်ပွဲတစ်ခုတွင် အခြားကျောင်းများသို့ သွားရောက်နိုင်သည်။
GU-Q တွင် လေ့လာရန် သင်တန်းကြေးမှာ $59,784 ဖြစ်သည်။ တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ် ၆ ရာခိုင်နှုန်းတိုးလာတယ်၊ ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ သူတို့ရဲ့ ကျူရှင်ခ အသေးစိတ် အချက်အလက်တွေကို
အခြားနိုင်ငံများသို့ ယဉ်ကျေးမှု ခရီးစဉ်များ စတင်ခဲ့သည်။
နိုင်ငံပေါင်း 633 တွင် 52 (BSFS) ဘွဲ့ရများ
ကျောင်း၏ ၀က်ဘ်ဆိုဒ်သို့ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပါ။
လုပ်သားအင်အားသည် အမြဲတစေ ပြောင်းလဲနေပြီး Texas A&M သည် ကာတာရှိ နိုင်ငံတကာကျောင်းသားများအတွက် ၎င်းတို့၏ကျောင်းသားများကို ဤပြောင်းလဲမှုနှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင် လေ့ကျင့်ပေးနေသည့် နိုင်ငံတကာကျောင်းသားများအတွက် တက္ကသိုလ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ သင်သည် မည်သည့်အခြေအနေမျိုးတွင်မဆို အလုပ်ပတ်ဝန်းကျင်ကို ခံနိုင်ရည်ရှိစေရန် တက္ကသိုလ်တွင် လေ့ကျင့်ထားသည်။
ထို့ကြောင့် ၎င်းတို့၏ ကျောင်းသားအများစုသည် မတူညီသော ကုမ္ပဏီများတွင် ကြီးကျယ်သော ခေါင်းဆောင်များဖြစ်လာရန် ဘွဲ့ရခဲ့ကြပြီး အချို့မှာ ၎င်းတို့၏ ကိုယ်ပိုင်ကုမ္ပဏီများကို စတင်ရန် ကြိုစားခဲ့ကြသည်။ တက္ကသိုလ်သည် ကျောင်းသားချင်းများနှင့် ခိုင်မာသော ဆက်ဆံရေးကို တည်ဆောက်ကာ ဟောပြောပြီး အလေ့အကျင့်များ ပြုလုပ်ပေးကာ နောက်ခံအမျိုးမျိုးမှ မတူညီသော ကျောင်းသားများနှင့် အပြန်အလှန် ဆက်ဆံပြီး အလုပ်လုပ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
သင်တန်းကြေးမတူ၊ ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ ပိုမိုလေ့လာသင်ယူရန်
ကမ်းလှမ်းချက်များ ပညာသင်ဆုများနှင့် ငွေကြေးအကူအညီများ
၎င်းတို့၏ ကျောင်းသားများ၊ ဆရာများနှင့် ဝန်ထမ်းများကို Aggie ဟုခေါ်သည်။
HBKU သည် ကာတာနိုင်ငံကို အပြုသဘောဆောင်သော အသွင်ပြောင်းရန်နှင့် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုလည်း ဖြစ်စေသော ဘွဲ့ရများကို လေ့လာနေသော တက္ကသိုလ်များထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤသည်မှာ နယ်ပယ်များစွာတွင် ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုများစွာပြုလုပ်နိုင်သော နိုင်ငံတကာကျောင်းသားများအတွက် ကာတာရှိ တက္ကသိုလ်အနည်းငယ်ထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။
(နိုင်ငံများ၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွင် ပိုမိုမြင့်မားသော သင်ယူမှုမှတစ်ဆင့် အပြုသဘောဆောင်သော အကျိုးသက်ရောက်မှုများဖြစ်စေရန်) ၎င်းတို့၏ ကျောင်းသားများ၊ ဆရာများ၊ ဝန်ထမ်းများ၊ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့် ခေါင်းဆောင်များကြားတွင် မျှဝေလေ့ရှိသော ယုံကြည်ချက်တစ်ခုရှိပါသည်။ နိုင်ငံပေါင်း 60 ကျော်က နိုင်ငံတကာ ကျောင်းသားတွေ ရှိတယ်။
ထို့အပြင်၊ Computer Engineering သည် HBKU တွင်ပေးသောတစ်ခုတည်းသောဘွဲ့ဒီဂရီအစီအစဉ်ဖြစ်သည်။
၎င်းတို့၏ ကျူရှင်ခမှာ ၎င်းတို့၏ ကောလိပ်များနှင့် သင်ကမ်းလှမ်းသော အစီအစဉ်အလိုက် ကွဲပြားသည်။ ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ HBKU ၏ သင်တန်းကြေးအကြောင်း ပိုမိုလေ့လာရန်။
နိုင်ငံတကာ ကျောင်းသား ၆၆ ရာခိုင်နှုန်း
The School Website ကို ဝင်ကြည့်ပါ။
CMU-Q သည် မကြာသေးမီက နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အာရပ်စကားရည်လုပွဲ ချန်ပီယံဆုရရှိခဲ့ခြင်းအပါအဝင် နယ်ပယ်များစွာတွင် ထူးချွန်သော ကျောင်းသားများအတွက် ကာတာရှိ နိုင်ငံတကာကျောင်းသားများအတွက် တက္ကသိုလ်များထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ CMU-Q ကို ကာတာဖောင်ဒေးရှင်း၏အကူအညီဖြင့် 2004 ခုနှစ်တွင် ကာတာတွင်တည်ထောင်ခဲ့သည်။
စတင်တည်ထောင်စဉ်အတွင်း ကျောင်းသား 41 ဦးသာရှိသော်လည်း ယခုအခါ နိုင်ငံပေါင်း 35 ကျော်တွင် မတူညီသောကျောင်းသားများရှိနေပြီဖြစ်သည်။ အရေးအကြီးဆုံးကတော့ သူတို့ပဲလေ။ University Rankings နှင့် QS World University Rankings အလိုက် ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံး တက္ကသိုလ် 28 ခုနှင့် 48 ခုမြောက် အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း.
CMU-Q သည် ၎င်းတို့၏ကျောင်းသားများ နေထိုင်နိုင်သည့်ပုံစံဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည်။ မှတ်သားထိုက်သော စာသင်ခန်းထက် ကျော်လွန်၍ ဘဝကို လေ့လာသင်ယူရန် နှင့် ၎င်းတို့၏ တိုးတက်အောင် လုပ်ဆောင်ရန် တွန်းအားပေးခံရသည်။ ခေါင်းဆောင်မှုစွမ်းရည်သူတို့ရဲ့ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအတွက် လိုအပ်တဲ့အရာပါ။
ထို့အပြင်၊ CMU-Q သည် Qatar ရှိ နိုင်ငံတကာကျောင်းသားများအတွက် တက္ကသိုလ်များထဲမှ တစ်ခုဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့၏ ကျောင်းသားများအား ၎င်းတို့၏ ဆက်သွယ်ရေး စွမ်းရည်များ တည်ဆောက်ရန်နှင့် အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ တတ်ကျွမ်းနားလည်သော အလုပ်ဖြစ်ရန် ကူညီပေးမည့် ကာတာနိုင်ငံရှိ တက္ကသိုလ်များထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ ရှိနှင့်ပြီးသား ကျောင်းသားကလပ်ကို စုစည်းရန် သို့မဟုတ် အသစ်တစ်ခုကို ဦးဆောင်ရန်ပင် သင်ရွေးချယ်နိုင်သည်။
CMU-Q ၏ကျူရှင်မှာ United States ရှိ Pittsburgh Campus နှင့်အတူတူပင်ဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းတို့၏နှစ်စဉ်ကျူရှင်ကြေးမှာ $57,560 (QAR 210,094) ဖြစ်ပြီး လှုပ်ရှားမှုစရိတ်၊ နည်းပညာကြေး၊ စာအုပ်များနှင့် ကျန်းမာရေးအာမခံများကဲ့သို့ ကျူရှင်ခနှင့်အတူ အခြားအခကြေးငွေများကို ပေးဆောင်ရမည်ဖြစ်သည်။
ထို့အပြင်၊ သင်လျှောက်ထားနိုင်သော ကုသိုလ်အခြေခံပညာသင်ဆုများနှင့် လိုအပ်သောထောက်ပံ့ကြေးများကဲ့သို့သော ငွေကြေးအကူအညီများ ရှိပြီး မည်သည့်နိုင်ငံမှမဆို ရရှိနိုင်ပါသည်။
ကမ်းလှမ်းချက်များ ပညာသင်ဆုနှင့် ထောက်ပံ့ကြေးများ
နိုင်ငံပေါင်း 35 ကျော်တွင် မတူညီသော ကျောင်းသား၊
University Rankings အရ ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံး တက္ကသိုလ် 28 ခု
QS World University Rankings အရ ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံး တက္ကသိုလ် ၄၈ ခု
လိုအပ်သော ထောက်ပံ့ကြေးများ ပေးသည်။
DI သည် နိုင်ငံတွင်းနှင့် နိုင်ငံတကာ ကျောင်းသားများအတွက် နှစ်စဉ် များပြားလှသော ပညာသင်ဆုများကို နှစ်စဉ် ပေးဆောင်သော နိုင်ငံတကာ ကျောင်းသားများအတွက် ကာတာရှိ တက္ကသိုလ်များထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤပညာသင်ဆုများကို အရည်အချင်းနှင့် ပညာရပ်ဆိုင်ရာ ပြိုင်ဆိုင်မှုပေါ်မူတည်၍ သို့မဟုတ် ငွေကြေးလိုအပ်ချက်အပေါ် အခြေခံ၍ ချီးမြှင့်နိုင်ပါသည်။
ထို့အပြင်7နှစ်အတွင်း DI ကျောင်းသားများသည် ကျောင်းသား 1,300 မှ 10,000 ကျော်အထိ ကြီးထွားလာပြီး ၎င်းတို့၏ ပရိုဂရမ်သည် 10 ခုနှစ်တွင် 2015 ပရိုဂရမ်မှ 18 ခုနှစ်တွင် ပရိုဂရမ် 2022 ခုအထိ တိုးလာခဲ့သည်။ ထို့အပြင် ၎င်းတို့သည် ၎င်းတို့၏ ပထမဆုံး Ph.D.D ကို စတင်ရန် အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီဖြစ်သည်။ ကာတာနိုင်ငံရှိ ပညာရေးနှင့် အဆင့်မြင့်ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ အတည်ပြုပြီးသော အစီအစဉ်ဖြစ်သည်။
DI ကို အာရပ်ကမ္ဘာရှိ လူမှုရေးသိပ္ပံနှင့် လူသားဆိုင်ရာ တိုးတက်မှုအတွက် အရေးတကြီး လိုအပ်နေသောကြောင့် 2015 ခုနှစ်တွင် စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ မှတ်ရန်လက်ရှိတွင် DI သည် Master's Degree ကိုသာ ပေးထားသည်။
ပါရဂူသင်တန်းကြေး QR7,000 ($1,922.55)
သူတို့ရဲ့ ပထမဆုံး Ph.D ကို စတင်ဖို့ အဆင်သင့်ဖြစ်နေပါပြီ။ အစီအစဉ်
VCUarts Qatar အတွက် အဓိက မျှော်မှန်းချက်မှာ တီထွင်ဆန်းသစ်မှုဖြင့် ကာတာနှင့် ဒေသတွင်းရှိ လူသား၊ လူမှုရေး၊ စီးပွားရေးနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကို မြှင့်တင်ရန်ဖြစ်သည်။ ပြီးတော့ သူတို့က ကျောင်းသားတွေကို ပြောင်မြောက်တဲ့ အနုပညာလက်ရာတွေ ဖန်တီးဖို့ ကူညီပေးခြင်းအားဖြင့် ဒါကို လုပ်တယ်။
VCUarts Qatar သည် နိုင်ငံတကာ ကျောင်းသားများအတွက် ကာတာရှိ တက္ကသိုလ်အနည်းငယ်ထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ အနုပညာ-သပ်သပ် ကဲ့သို့သောအစီအစဉ်များ; အနုပညာသမိုင်း၊ ဖက်ရှင်ဒီဇိုင်း၊ ဂရပ်ဖစ်ဒီဇိုင်း၊ အတွင်းပိုင်းဒီဇိုင်း၊ ပန်းချီနှင့် ပုံနှိပ်ထုတ်လုပ်ရေး၊ အနုပညာအခြေခံအုတ်မြစ် စသည်ဖြင့်၊ ထို့အပြင် VCUarts Qatar ကျောင်းသားများသည် ဆောင်းဦး သို့မဟုတ် နွေဦးရာသီတွင် VCU Richmond ကျောင်းဝင်းတွင် ပညာသင်ကြားရန် ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။
စာသင်နှစ်တစ်နှစ်လျှင် $29,409 သို့မဟုတ် QAR107048.76; သို့မဟုတ် semester တစ်ခုလျှင် $14,704.50 သို့မဟုတ် QAR53524.38။ ပေးဆောင်ရမည့် အခြားအခကြေးငွေများ၊ ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ ပိုမိုလေ့လာသင်ယူရန်။
စာသင်နှစ်တစ်နှစ်လျှင် $25,956 သို့မဟုတ် QAR 94479.84၊ သို့မဟုတ် semester တစ်ခုလျှင် $12,978 သို့မဟုတ် QAR 47239.92။ ထို့အပြင် သင်တန်းကြေး သက်သာသော အချိန်ပိုင်း အစီအစဉ်တွင် စာရင်းသွင်းနိုင်ပါသည်။
နိုင်ငံပေါင်း ၃၄ နိုင်ငံမှ ကျောင်းသား ၃၀၂ ဦး
နိုင်ငံပေါင်း 919 မှ ကျောင်းသားဟောင်း 50 ဦး
Northwestern University သည် ကွဲပြားခြားနားသော ယဉ်ကျေးမှုများနှင့် လူမျိုးစုကို မြှင့်တင်ပေးသည့် နိုင်ငံတကာ ကျောင်းသားများအတွက် ကာတာရှိ တက္ကသိုလ်များထဲမှ တစ်ခုဖြစ်ပြီး သင့်အိပ်မက်ကို အကောင်အထည်ဖော်ရန် ကူညီပေးသည်။ ကျောင်းသားများသည် လူသားပညာနှင့် လူမှုရေးသိပ္ပံဘာသာရပ်များတွင် ဘာသာရပ်များစွာကို သင်တန်းမျိုးစုံတက်နိုင်သည့်ကျောင်းဖြစ်သည်။
ထို့အပြင် NU-Q သည် သင့်ဘွဲ့ကြိုလျှောက်လွှာကို ပြန်လည်သုံးသပ်သည့်အခါ သင့်မိသားစု၏ဘဏ္ဍာရေးအခြေအနေကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းမရှိသော နိုင်ငံတကာကျောင်းသားများအတွက် ကာတာရှိတက္ကသိုလ်အနည်းငယ်ထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ နောက်ပြီး နိုင်ငံတကာ ကျောင်းသားတွေကို သူတို့ရဲ့ ရန်ပုံငွေနဲ့ ကူညီဖို့ Scholarship ရှိတယ်။
နိုင်ငံပေါင်း ၃၂ နိုင်ငံမှ ကျောင်းသား ၁၁၀ သည် ယနေ့အထိ အနောက်မြောက်ပိုင်း ကာတာ၏ အကြီးဆုံး ဘွဲ့လွန်အတန်းဖြစ်သည်။
NU-Q သည် United States ရှိ အိမ်တွင်းတက္ကသိုလ်ကျောင်းဝင်းကဲ့သို့ ကျူရှင်ကို တူညီပြီး ၎င်းတို့၏ကျူရှင်မှာ $61,498 သို့မဟုတ် QAR 223,854 ဖြစ်သည်။ သို့မဟုတ် semester တစ်ခုလျှင် $30,749။
US News and World Report အရ US အဖွဲ့အစည်းများကြားတွင် အဆင့် ၉ ရှိသည်။
နိုင်ငံပေါင်း ၃၂ နိုင်ငံမှ ကျောင်းသား၊
ဤသည်မှာ ကာတာနိုင်ငံရှိ တက္ကသိုလ်အနည်းစုထဲမှ တစ်ခုဖြစ်ပြီး၊ အွန်လိုင်းသင်တန်းများ ပို့ချပေးသည့် နိုင်ငံတကာ ကျောင်းသားများအတွက်၊
၎င်းတို့သည် ဘွဲ့ကြိုလေ့လာမှုအတွက် ၎င်းတို့၏ဝင်ခွင့်လိုအပ်ချက်များနှင့် မကိုက်ညီသော ကျောင်းသားများကို ပြုစုပျိုးထောင်ပေးသည့် IFP (International Foundation Diploma) ကို ပေးဆောင်သည်။ ၎င်းသည် ပရိုဂရမ်ပြီးနောက် သင့်အား ဒီပလိုမာဘွဲ့ကို ချီးမြှင့်ပေးမည့် နှစ်နှစ်စာအစီအစဉ်ဖြစ်သည်။
ဘွဲ့ကြိုဒီဂရီများ (B.Sc Hons/BEng Hons.): QAR 75,000 နှစ်စဉ်
Ulster University International Foundation အစီအစဉ်- QAR 75,000 ပြည့်အစီအစဉ်
Ulster University ဘွဲ့လွန်ဒီဂရီများ (MSc) 2-Year P/T- 90,000 ပြည့် အစီအစဉ်
Ulster University MBA (Leadership in Women) 2-Year P/T- QAR 120,000 ပြည့်အစီအစဉ်
အကြိုအသုံးအဆောင်အင်္ဂလိပ်စာအစီအစဉ် (သင်ခန်းစာ ၅ ခု)။ QAR 10,000 အစီအစဉ်အပြည့်
သင်၏ပရိုဂရမ်ကိုမစတင်မီ သို့မဟုတ် တစ်နှစ်လျှင်2အရစ်ကျထက်ပို၍ ကျူရှင်များအပြည့်ပေးချေရပါမည်။
ဗြိတိသျှကောင်စီ & BTEC မှအသိအမှတ်ပြုသည်။
BEIN Media Group နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း
bachelor's degree ကိုရရှိရန်နည်းလမ်းနှစ်ခုကမ်းလှမ်းသည်; BTEC အဆင့်မြင့်အမျိုးသားဒီပလိုမာ၊ သို့မဟုတ် BSc (Hons) ဘွဲ့။
Ulster University တွင် ဘွဲ့ကြိုရရှိသော ကျောင်းသားများအတွက် Master's Degree Scholarship
ကျောင်းသားတိုင်း၏ လိုအပ်ချက်နှင့် ကိုက်ညီအောင် လိုက်လျောညီထွေရှိသော လေ့လာမှု
United Kingdom တွင် သင့်ဘွဲ့၏ အစိတ်အပိုင်းကို လေ့လာရန် သင်ရွေးချယ်နိုင်သည်။
မကြာမီဖွင့်တော့မည်။ Lusail ရှိ ကျောင်းဝင်းအသစ်။
ကျောင်း Website ကို ဝင်ကြည့်ပါ။
ဟုတ်ပါသည်၊ ကာတာရှိတက္ကသိုလ်များအတွက် ပျမ်းမျှကျူရှင်ကြေးမှာ semester တစ်ခုလျှင် $20,000 (QAR 72,820) ဖြစ်ပါသည်။
ဟုတ်ကဲ့၊ နိုင်ငံတကာကျောင်းသားများအတွက် ကာတာရှိ အကောင်းဆုံးတက္ကသိုလ်အားလုံးနီးပါးသည် ၎င်းတို့၏ကျောင်းသားများအား ပညာသင်ဆုများပေးသည်။
ကာတာသည် လေ့လာရန် အကောင်းဆုံးနေရာများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်ပြီး အထူးသဖြင့် အမေရိကန်နှင့် ဗြိတိန်တို့ကဲ့သို့ နိုင်ငံများတွင် တည်ဆောက်ပြီး နိုင်ငံအတွင်း ၎င်းတို့၏ နိုင်ငံတကာကောလိပ်များကို ဆက်လက်တည်ဆောက်နေသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်၊ ၎င်းတို့၏တက္ကသိုလ်များသည် ဘဝကဏ္ဍအသီးသီးတွင် ထူးချွန်သောခေါင်းဆောင်များဖြစ်လာစေရန် ရှေ့သို့တက်လှမ်းခဲ့သော အံ့သြဖွယ်ကျောင်းသားများကို မွေးထုတ်ပေးခဲ့သည်။
နိုင်ငံတကာကျောင်းသားများအတွက် ဟန်ဂေရီရှိ တက္ကသိုလ်များ
အီတလီရှိ တက္ကသိုလ်များတွင် အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် သင်ကြားပေးသည်။
နိုင်ငံတကာကျောင်းသားများအတွက် စင်ကာပူရှိ တက္ကသိုလ်များ
နိုင်ငံတကာကျောင်းသားများအတွက် Cyprus ရှိတက္ကသိုလ်များ
အကြောင်းအရာဖန်ဆင်းရှင် at Study Abroad Nations | ကျွန်ုပ်၏ အခြားဆောင်းပါးများကို ကြည့်ပါ။
Daniel သည် နိုင်ငံခြားတွင် ပညာသင်ကြားလိုသော ကျောင်းသားများနှင့် ပုဂ္ဂိုလ်ရေး တိုးတက်မှု၊ ကျွမ်းကျင်မှု ရယူရန် သို့မဟုတ် ဘွဲ့ဒီဂရီတစ်ခုအတွက် အွန်လိုင်းသင်တန်းတက်လိုသူများအတွက် အထောက်အကူဖြစ်စေရန်အတွက် အကြောင်းအရာများကို သုတေသနပြုလုပ်ဖန်တီးသည့် အတွေ့အကြုံ2နှစ်ကျော်ရှိသော အကြောင်းအရာဖန်တီးသူဖြစ်သည်။ Dan သည် သုတေသနအခြေပြု အကြောင်းအရာဖန်တီးသူအဖြစ် 2021 ခုနှစ်တွင် SAN သို့ ဝင်ရောက်ခဲ့သည်။
သူသည် လူသစ်များနှင့်တွေ့ဆုံပြီး ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးအသစ်ကို နှစ်သက်သည်။
Harvard MBA ပညာသင်ဆု ဘယ်လိုရယူမလဲ။
MBA နိုင်ငံခြားပညာသင်ဆု ၂၃
MBA အတွက် US တွင်ထိပ်တန်း 15 ပညာသင်ဆု
ကျောင်းပြင်ပလမ်းညွှန် မာစတာပညာသင်ဆု ပါရဂူဘွဲ့ပညာသင်ဆုများ ပညာသင်ဆုနှင့်အတူနိုင်ငံခြားတွင်လေ့လာပါ ဘွဲ့လွန်ပညာသင်ဆုအောက်မှာ
Previous post:21 ရာစု၏ နည်းပညာ ဆန်းသစ်တီထွင်မှုများသည် ဖျော်ဖြေရေးနှင့် ဂိမ်းလောကကို သက်ရောက်မှုရှိသည်။
Next Post:အားကစားဆေးပညာအတွက် အကောင်းဆုံးကောလိပ် 10 ခု